ပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံးကိုရီးယား Cushionများ – MyStyle Myanmar
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Foundation တွေအပြင် Cushion တွေကလည်း အရမ်းခေတ်စားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုရီးယား Cosmetics တွေကလည်း ဈေးကွက်မှာ အရမ်းခေတ်စားလာပါတယ်။ Cushion တွေရဲ့အားသာချက်ကတော့ သူ့တစ်မျိုးထဲလိမ်းလို့ရတာပါပဲ။ Foundation လို အပေါ်ကနေ Loose Powder နဲ့ Cream Pact တွေလည်း ထပ်သုံးစရာမလိုပါဘူး။
သူက အချိန်ကုန်လည်းသက်သာပြီး လိမ်းရတာအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရအောင် အကောင်းဆုံးကိုရီးယား Cushion ငါးမျိုးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
MISSHA M Magic Cushion SPF50 No. 23 and No. 27
MISSHA M ရဲ့ Magic Cushion SPF50 လေးကတော့ နံပါတ်တစ်အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။ နံပါတ်တွေအများကြီးထဲမှာမှ No. 23 နဲ့ No. 27 ကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးပါ။ ဒီ MISSHA M Magic Cushion ရဲ့အားသာချက်ကတော့ SPF 50 ပါတဲ့အပြင် High Coverage ကို ရရှိစေပါတယ်။ လိမ်းထားလိုက်ရင် Long Lasting ဖြစ်စေပြီး မျက်နှာလေးကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။
Sulwhasoo Evenfair Perfecting Cushion No.13
Sulwhasoo Evenfair ရဲ့ Perfecting Cushion လေးကတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် ရေဓာတ်ကောင်းကောင်းဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ Cushion လေးပါ။ သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ Moisturising ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပြီး လိမ်းထားလိုက်ရင် Natural Look လေးကို ရရှိစေပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့နံပါတ်တွေထဲမှာတော့ No.13 က လူကြိုက်များပါတယ်။
IOPE Air Cushion Natural Glow N21 SPF 50+ PA
အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ IOPE ရဲ့ Air Cushion လေးဟာဆိုရင် SPF 50 + တောင်ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ Anti – ageing သမားတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး မျက်နှာကိုအစိုဓာတ်ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ Long Lasting လည်းဖြစ်စေပြီး SPF လည်း များစွာပါဝင်နေလို့ နေလောင်ဒဏ်ကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိမ်းထားလိုက်ရင် မျက်နှာလေးက နူးညံ့ပြီး ဖြူသွားစေပါတယ်။
Mconos Magic BB CC Moist Air
Mconos က ဒီ Cushion လေးထဲမှာတော့ BB Cushion ရော CC Cushion ရော နှစ်မျိုးလုံးပါပါတယ်။ သူကတော့ Coverage ကို Medium လောက်ပေးနိုင်ပြီး မျက်နှာကို ဖြူစေပါတယ်။ Sensitive Skin တွေအတွက်လည်း သင့်တော်တဲ့အပြင် မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အစက်အပျောက်တွေကိုလည်း ဖုံးသွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Long Lasting လည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
LANEIGE” BB Pore Control No.21
အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ LANEIGE ရဲ့ BB Pore Control Cushion လေးကတော့ Matte Finish Look လေးဖြစ်ပြီး မျက်နှာကို အဆီဓာတ်ထိန်းပေးပါတယ်။ လိမ်းထားတာနဲ့ မျက်နှာလေးက ကြည်လင်ပြီးတောက်ပနေစေပါတယ်။ သူက လိမ်းထားရင် ၁၂ နာရီလောက်ကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
MyStyle Myanmar2021-04-28T17:24:04+06:30April 28th, 2021|Beauty, မိတ်ကပ် – Make Up|